ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ Archives - ACHITLWINPYIN
Category: ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ
ပထမဦးဆုံး မေးချင်တာကတော့ မင်း.. ဘီယာသောက်တတ်လား…??? လေ့လာမှုတွေအရ ဘီယာသောက်တဲ့အမျိုးသားတွေက မသောက်တဲ့သူတွေထက်ပိုပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ထပ်ပြီးတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့ အလွန်အကျွံ ကွဲပြဲအောင် သောက်လျှင်တော့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ဘာမှမသိတော့အောင်ကို ပလပ်ကျွတ်သွားစေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ကဲ ဒီတော့ ပြောချင်တာက အတော်အသင့်လောက် သောက်သုံးပေးတာ…
ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်တဲ့ ရောဂါ (၄၀)… ရှဲဖြစ်အောင် ရှဲယူထားလိုက်ပါ။
ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်စေမဲ့ ရောဂါ အမျိုး(၄၀) (ရှယ်ထားနော်) ပင်စိမ်းပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်ပြီး အပူပိုင်းဒေသတွင် ပိုမို၍ ပေါက်တတ်ကြသည်။ ပင်စိမ်းပင်သည် သဘာဝအလျောက် ပေါက် ရောက်သော အပင်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုး၍လည်းရသည်။ မျိုးစေ့မှတဆင့်အပင်စိုက်ရန် လွယ်ကူသောအပင် ဖြစ်သည်။ မြေသြဇာ အထူးမလိုအပ်လှ ပေ။ တနှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်၊…
လုံးဝ မပေါ့ဆသင့်တဲ့ သွေးခဲခြင်း လက္ခဏာရပ်များ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ များပြားတဲ့ သွေးကြောပေါင်းများစွာရှိပြီး သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်ဟာ အရေးပါလှပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ လုပ်ဆောင်မှုများ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သတိပေး လက္ခဏာရပ်များ ပြတတ်ပါတယ် ။ သွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာထဲကမှ သွေးခဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ သတိပေး လက္ခဏာရပ်တွေ ပြတတ်ပါတယ် ။…
ACHITLWINPYIN November 17, 2017
အရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရတာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုမရှိတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းတာ၊ လူပျို အပျိုဖော်ဝင်စပြုလာတဲ့အခါနဲ့ တခြားအကြောင်းလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားရဲ့မွေးညှင်းပေါက်တွေမှာ ဖုန်နဲ့အဆီတွေစုလာတဲ့အခါမှာ ဆားဝက်ခြံတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ၀ပ်နေတဲ့အဆီတွေက အရေပြားမှာယောင်ယမ်းတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ ၀က်ခြံဖုတွေထွက်လာကာအရေပြားကိုပျက်စီးသွားစေတာပါ။ အလှကုန်တွေက ငွေကုန်ကြေးကျများသလို အချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်း ကိုယ်နဲ့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ စာဖတ်သူတွေကို ၀က်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံ၊ အမည်းစက်တွေနဲ့ ပါးရေတွန့်တာတွေကို ကုသဖို့အတွက်…